VAKY BANTSILANA : Fotoan’ny fanantenana…fa tsy manahy tena | NewsMada
Efapolo andro taorian’ny nitsanganan’i Jesoa ho velona no niakarany ho any an-danitra. Io no andro nankalazain’ny Fiangonana omaly, ho an’ny Kristianina, eny, na ho an’ny tsy mpino koa aza. Vantany vao nitsangan-ko velona Izy dia tafiditra tanteraka amin’ny voninahitr’Andriamanitra. Isika olombelona mandia tany sy miaina eto ambany masoandro kosa, miaina anatin’ny fotoana ary mila fotoana hahatakarana ny zava-miseho, indrindra raha manery antsika hiova hevitra tanteraka ho an’ny tsara. Anisan’ny fotokevitry ny Fiangonana izany… Fotoan’ny fanantenana izao, ary mino ny Kristianina fa izay notanterahin’ny Ray ho an’ny Zanany, tsy maintsy hotanterahiny ho antsika koa….
Fotoana iray natao handinihan’ny mpiray firenena tena ihany koa ny fotoana omaly, iny. Natao handinihan-tena, indrindra ho an’ireo mpitantana ny Firenena. Mbola mahazo manantena ny fihatsaram-piainany ve ny vahoaka, izay toa mihary tapany tsy ho tompony eto amin’ny tanindrazany? Tsy hita be ihany ny tena fiainam-bahoaka fa toa zary tompony mangataka atiny amin’ny haren’ny taniny. Misoko mangina ny fanomezana ny tany ho an’ireo vahiny, izay mampitsanga-mitoetra ny tompon-tany. Ireo efa nahazo alalana an-tsokosoko, manao tantely afa-drakotra. Hoy ny fanambaran’ny Eveka, farany teo, “diniho fa ny harena nomen-Janahary tsy miverina indroa. Nahoana re no viraviraina tahaka izao ny tanindrazantsika?”
Vahaolana vonjimaika sy tsy mahavita taona no isitrahan’ny vahoaka avy amin’ireo mpitondra. Mitovy tsy misy valaka amin’ny varialoha, mahafatrapo fa tsy mahavita taona. Miezaka mametraka ny fahamarinan-toerana politika hatrany ny mpitondra, saingy tsy ny soa iombonana loatra no imatimatesan’izy ireo fa ny politika seho ivelany. Ny fanomezana tolotolotra kely tahaka ny fizarana vary sy menaka tsy mahavita herinandro, mba tsy ilazana hoe tapa-bolana. Ny asa tanamaro tsy mahavita taona, izay toa miharo fandatsana aza. Sodokan’ny vonjimaika ny mpitondra ka tsy mihevitra ny hoentin’ela? Miezaka ny manamarin-tena, saingy ny fahendren-drazantsika manambara fa “ny be teny mamoron-dainga ary ny marovava tsy mahavita asa…”.
Raha mbola mitohy hatrany ny fisehoana manao zavatra amin’ny tolotolotra tsy mahavita taona, ho very tanteraka ny fanantenan’ny Firenena. Miharihary tahaka ny vay an-kandrina ny raharaha, fa tsy misy manantena…, saingy misy manahy tena amin’ny zavatra tanterahiny ho an’ny Firenena. Fiampangan-tena aza no miseholany, mampiana-dratsy ny vahoaka tsy hioitra, fa toa zarina hitambezo tsotra izao. Tena ialana amin’ny fanampiana tokoa ve no hanaovana fanampiana sa fizarana hiankin-doha tsy misy fiafarany? Manantena anefa ny valalatsimandadiharona fa mbola misy ny tsy maty fanahy. Aorintsika ny fanantenana ka ataontsika rano midina an-kavoana leiretsy, ny miato tsy misy fa ny aina no matezà…